स्विच र सकेट एबीबी: समीक्षा
लगभग कसैले नाम एबीबी अन्तर्गत विद्युत उत्पादन ज्ञात। कारण उत्पादन उच्च गुणस्तर र नवीन प्रविधिहरू, स्विच र सकेट एबीबी संसारभरि ज्ञात को आवेदन मा केंद्रित भन्ने तथ्यलाई गर्न।
ब्राउन Boveri र ASEA स्वीडिश - - एकताबद्ध एबीबी भनिन्छ व्यावसायिक ब्रान्ड को इतिहास दुई कम्पनीहरु भन्ने तथ्यलाई थाले। फलस्वरूप, र एबीबी द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, अन्ततः प्रमुख युरोपेली र अन्तर्राष्ट्रिय electrotechnical निर्माताहरु संग एक बराबर हुनेछ।
को eponymous समूह अब जर्मन कम्पनी Busch-Jaeger GmbH, एक स्पेनी कम्पनी Niessen र चेक Elektrpo-बर्लिन कारखाना, जो ताराहरु सिस्टम आईएसओ 9001. साथै लागि उच्चतम गुणस्तर उत्पादनहरु को बारे आठ हजार मोडेल को कुल उत्पादन हुन्छन्, यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु दिगो र प्रमाणित सुरक्षा। सकेट र एबीबी स्विच प्रतियोगिहरु स्टाइलिश डिजाइन र सजिलो कुनै पनि भवन मा एम्बेड देखि एकदम फरक। उत्पादनहरु को प्रकार लेख पछि छलफल।
महानता, impeccability, उदारता
Dinasty, कैरेट, Impuls, Busch-Jaeger को जर्मन विभाजन द्वारा निर्मित जुन: यी तीन गुणहरू - - आकृति लाइनको महानताका, सिद्ध डिजाइन आकार र एक महान सामाग्री पूर्ण उत्पादनहरु तीन श्रृंखला अनुरूप:
Dinasty - यो श्रृंखला एक विशिष्ट जर्मन डिजाइन दृष्टिकोण विशेषताहरु। स्थिति, कुनै दोष नभएको कार्यान्वयन मोल र परिष्कृत स्वाद छ गर्नेहरूका लागि उपयुक्त उत्पादन। यस्तो पत्थर, धातु, ग्लास रूपमा प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग गरेर श्रृंखला को उत्पादन मा एक प्राविधिक स्थापनाको लागि मुख्य कोठा, साथै उच्च गुणस्तरीय प्लास्टिक स्थापित गर्न।
कैरेट - सबैभन्दा मांग र परिष्कृत उपभोक्ताहरु को आवश्यकताहरु र स्वाद पूरा हुनेछ भनेर अर्को डिजाइनर श्रृंखला छ। विशिष्ट सतह उपचार undergo मात्र प्राकृतिक सामाग्री, शोधन प्रकारका emphasizing प्रयोग गरेर श्रृंखला मा फ्रेम को निर्माण मा।
आवेग - एक अद्वितीय पेटेंट डिजाइन र सिद्ध लाइनको एउटा उदाहरण हो। श्रृंखला कि साँचो जर्मन गुणस्तर र विश्वसनीयता संग संयोजन विदेशी fineness र शान उत्पादनहरु distinguishes। सकेट एबीबी Impuls मूल नरम परिपत्र रोशनी र पेटेंट पुस-फिर्ता तंत्र छ।
को modularity र विश्वसनीयता
यो खण्ड निम्न उत्पादनहरु ध्यान गर्नुपर्छ:
मड्यूलर ताराहरु सामान, इटालियन स्तर द्वारा उत्पादित - Zenit ट्याङ्गो एक श्रृंखला र एबीबी Niessen को स्पेनी विभाजन छ। ठीक लाइनहरु, को संयन्त्र, प्राकृतिक सामाग्री को स्कोप सबै भागहरु उच्च विश्वसनीयता - स्विच र एबीबी सकेट को घोषणा गुणस्तर अनुरूप। Modularity तपाईं सजिलै रिमोट स्थानहरूमा यी उत्पादनहरु स्थापना गर्न र आवश्यक कार्यक्षमता प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो श्रृंखला मा, मुख्य प्रकाश स्विच कि भित्री सान्त्वना थप्न फिक्का हरियो एल ई डी छन्। यो पनि यस श्रृंखला को रंग, तीस-छ फरक भेरिएसनहरूमा मिलेर एक किसिम, साथै त्यो अनुमति डिजाइनर कल्पनामा पूर्ण जबर्जस्ती फैलाउनु प्राकृतिक सामाग्री को संयोजन को विविधता टिप्पण लायक छ।
Tacto श्रृंखला सुरक्षा र विश्वसनीयता को उच्च स्तर द्वारा विशेषता छ। साथै, उपकरण पनि समग्र डिजाइन गर्न ठूलो वाहेक, उज्यालो सुरुचिपूर्ण बुद्धिमान प्रकारका संग कुनै पनि शैली को भित्री छन्।
अतुलनीय डिजाइन र शैली निम्न श्रृंखला द्वारा प्रतिष्ठित छ:
जर्मन Busch-Jaeger बोट को उत्पादन मूल श्रृंखला distinguishes। स्विच र सकेट एबीबी मूल आवश्यकता जहाँ भित्री महत्तव गर्न मौका दिनेछु कि संतृप्त उज्ज्वल रंग को एक विविध प्यालेट विशेषताहरु। विश्वसनीय र आधुनिक, यी उत्पादनहरु विश्व बजार electroaccessories मा एक प्रवृत्ति हो र उपकरणहरू को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत। यो हल्का नियन्त्रण उपकरणहरू स्विच, एफएम र टिभीमा आउटलेटहरू र अधिक। आधारभूत 55 Trendline को श्रृंखला विस्तार को मनपर्ने जारी। सकेट एबीबी मूल 55 र रंग आवेषण को विविधता र अन्धकारमा चमकिलो एक फ्लोरोसेन्ट फ्रेम को उपस्थिति, द्वारा प्रतिष्ठित अन्य सामान।
को भित्री को सौंदर्य तत्व - उत्पादनहरु एक्लै श्रृंखला हो। वेयर-प्रतिरोधी प्लास्टिक को बने, यो कोठा को सजावट बनाउन असामान्य आकारहरू, धातु र रंग संयोजन, अलग छ।
फिजूलखर्ची, साहस, सद्भाव
यी गुणहरू उत्पादनहरु को निम्न श्रृंखला मा उल्लेख गर्नुपर्छ:
अल्फा अनन्य - आधुनिक डिजाइन, रंग र भित्री मा अनुरूप को व्यापक दायरा। भौतिक उत्पादन फ्रेम र अस्तर - प्राकृतिक पत्थर बनाइएका छन् फरक रंग कोटिंग आवेषण संग असर प्रतिरोधी Metallized प्लास्टिक र धातु।
अल्फा Nea - स्विच र सकेट एबीबी यो श्रृंखला लाइनको अनुरूप, डिजाइन, रंग विविधता र चिल्लो गोलाकार आकारहरू को शान सुविधा।
झाडी-Duro / पलटा एसआई, भविष्य लामबद्ध र एसआई लामबद्ध। यी श्रृंखला आधारभूत र brevity र जर्मन minimalism द्वारा प्रतिष्ठित छन्। एकै समयमा तिनीहरूले तपाईंलाई आवश्यक सफा रेखा र कार्यक्षमता संयोजन। राउन्ड देखि एक थोडा औंल्याए कुनामा भएको: फ्रेम फरक भेरिएसनहरूमा छ।
वसन्त - खुसी नरम चमक, उत्थान र दिने अनुरूप एक श्रृंखला। उत्पादन विभिन्न रंग को रङ्गिन प्रस्तुत।
मूल डिजाइन द्वारा निम्नानुसार:
नव शृंखला - रमाइलो र तनावमुक्त, ELEKTRO बर्लिन को चेक शाखा बाट। श्रृंखला उज्ज्वल रंग मा एक युवा डिजाइन विशेषताहरु, कोठा को व्यक्तित्व, जोड दिन्छ। को हाइलाइट साँघुरो प्रमुख मा रोशनी को उपस्थिति छ।
- धातु, तीव्र किनारा र असामान्य ratsvetkami र समय ARBO को चिसो चम्कने संग उच्च प्रविधी - न्यानो र बुद्धिमान रंग, एक आरामदायक र अनुकरण प्रकृति सिर्जना समय: समय श्रृंखला दुई प्रजातिहरू समावेश छ।
यस लेखमा मुख्य वर्णन, तर उत्पादन को सबै श्रृंखला छैन निगम एबीबी। तर सहित सकेट एबीबी सबै electroaccessories, यो निर्माता देखि जर्मन गुणस्तर र उच्च स्तर को एउटा उदाहरण हो। त्यो के सबै उत्पादनहरु विश्वव्यापी मान्यता बनाउँछ छ।
यो विभाजन मात्र विद्युत तर पनि भिडियो निगरानी र पहुँच सहित यस्तो "स्मार्ट घर" को रूपमा प्रणाली, स्वचालित प्रणाली, उत्पादन गर्छ। उत्पादन विश्वसनीयता, स्थायित्व, गुणस्तर र स्टाइलिश डिजाइन समाधान द्वारा प्रतिष्ठित छन्।
विन्डोज नोवोसिबिर्स्क lattices मा, विंडो नोवोसिबिर्स्क lattices
तल्ला ताप पानी को लागि बढते मैट Profiled
त्यहाँ घर मा मोल्ड थियो: के र कसरी जोगिन
फर्श slabs बिछाउने लागि तरिका: सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन
स्थापना मिक्सर - कार्य प्रत्येक शक्ति
कसरी सामान्य भन्दा बढी पैसा कमाउन?
एक बच्चाको लागि शक्तिशाली शक्ति आमाको प्रार्थना
"स्याउ" - प्राण एक नृत्य!
शिष्टाचार व्यापार संचार
उपयोगी तरकारी एक जोडी multivarka
Harald Fairhair: नर्वे को पहिलो राजा को एक जीवनी
को "जवान" रोग: रगत छोराछोरीको दबाव
Chekhov गरेको "Ionich" को एक सारांश: यस क्लासिक सम्झना
तयारी "Derinat" (खस्छ, समाधान)। निर्देशन
Lengthening Gazelle - लाभ, जोखिम र काम लागत